HDPE Pipe Pressure sy Fittings mpanamboatra - Vinyl Pipe
Manufacturer Hijery Range Download Katalana HDPE Paile
Manufacturer Hijery Range Download Katalana
Fampiharana HDPE Pipe
Mpanamboatra Sodina HDPE tena izy
Vinyl Tubes Pvt Ltd manolotra fantsona sy fittings HDPE marobe. Izahay dia IS Company Standard ary manamboatra vokatra kalitao tsara indrindra amin'ny HDPE Pipe sy Fittings. Ny fantsom-boaloboka dia novokarina tamin'ny fizotran'ny fitrandrahana raha ny fittings kosa namboarina tamina fantsom-pifandraisana ambanin'ny ISO 9001: 2015 Quality Management System. Ny fananana afovoany malefaka an'i Pipe dia manamora ny fikirakirana sy ny fametrahana azy. Ny Vinyl Tubes Pvt Ltd dia manome koa ny fantsom-pohy PE / PP ary ny fanohanana miaraka an'ireo tetikasa amin'ny turnkey. Ny fantsontsika dia vita avy amin'ny fantsona manokana Eth Dénéity Poly Ethylene - fitaovana tsy misimisy simika izay misy fiatraikany lehibe ary koa tanjaka mahery. Vita amin'ny famokarana sy ny fanandramana iraisam-pirenena.
Ny paipaintsika dia mety amin'ny fantsom-piarovan-tseranana avo lenta
Ny fantsona HDPE dia karazana fantsom-plastika azo ovaina ampiasaina amin'ny famindrana tsiranoka sy gazy ary matetika ampiasaina hanoloana ireo fantsona vita amin'ny beton na vy lehibe. Vita avy amin'ny HDPE thermoplastic (polyethylene avo lenta), ny haavon'ny tsy fetezana sy ny fatorana môlekiola mahery vaika dia mety amin'ny fantsom-pandehanan-tseranana avo lenta. HDPE fantsona dia ampiasaina erak'izao tontolo izao ho an'ny fampiharana toy ny rano an-drano, herin-tsolika, loharanon-tsiranoka, fantsom-pitaterana an-tsokosoko, fanondrahana any ambanivohitra, fantsom-pamokarana herinaratra, fantsom-pifandraisana herinaratra sy fifandraisana, ary fantson-drano sy tafio-drivotra.
Fitsipika: ISO, DIN, ASTM, ISI, BIS.
Diameter: 20 mm - 500 mm (1/2 "ka 20")
Halavany mahazatra 6 metatra.
Naoty fanerena avy amin'ny: PN 2. 5 ka hatramin'ny 16, SDR 6 hatramin'ny 41
Izy io dia mitazona ny toetra ankapobeny an'ny tsiranoka ao anatiny.
Moss mitazona noho ny atiny anatiny dia azo ampiasaina amin'ny rafi-pisotro rano.
Noho ny toetrany simika dia mahatohitra mafy ny akora simika izy io.
Ny maka endrika sy ny fidinan'ny tany misolampy amin'ny alàlan'ny fametrahana dia tena tsotra satria malefaka.
Noho ny toetran'ny elastika avo lenta, ampiasaina amin'ny faritra izay ahazoana aina tena betsaka. Izy io dia afaka mampifanaraka ny tenany arakaraka ny fitarihan'ny fivezivezena ary tsy tapaka.
Mavesatra maivana, matanjaka, maharitra ary tsy misy fikojakojana
HDPE Pipe haben'ny tabilao
Mampiseho 1 ka hatramin'ny 10 amin'ny 106 fidirana
Manodidina ny Wt.
Ny fomba fanamafisam-peo sy ny fanangonana dia tena tsotra.
Mora entina noho ny lanjany ka mora ny fandefasana.
Tena mahazaka asidra sy alkaly izy io. Simba fotsiny amin'ny asidra azota.
Sariaka amin'ny tontolo iainana.
Tsy voakasiky ny tany ambanin'ny tany, tsy misy fananana marefo.
Ny haavon'ny fikorontanana tsara, mitafy ary manana harafesina.
Izy io dia mahery manohitra ny zavamiaina bitika.
Ny sokajy paipa samihafa izay amboarinay dia: -
Hdpe Pipe (IS: 14333: 1996)
Hdpe Pipe (IS: 4984: 2016)
Hdpe Pipe (IS: 14151)
Pipe Hdpe (ISO 4427 Pt-2)
Mahazo tombony fanampiny
Azo antoka ve ny fantsona HDPE amin'ny rano fisotro?
Ie. Ny fantsom-panafody HDPE voamarina ho an'ny fampiharana rano azo sotroina dia novokarina avy amin'ny tsindrona polyethylene nomen'ny tsindry neken'ny NSF ho an'ny serivisy fisotro ampahibemaso.
Misy fantsona HDPE ve amin'ny haben'ny fantsom-by vy sy ny haben'ny fantsom-by vy any ivelan'ny savaivony?
Eny, ny fantsom-panafody HDPE dia misy amin'ny fantsom-by vy (IPS) sy ny fantsom-by vy fantsona DIPS), izay fantatra koa indraindray amin'ny haben'ny fantsom-by (CIPS). Ny fantsom-pirinty HDPE IPS dia manana savaivony ivelany mitovy amin'ny vy mainty na fantsom-by vy. DIPS habe HDPE dia manana savaivony ivelany mitovy amin'ny fantsom-by / ductile iron. Matetika, ny haben'ny fantsom-by vy dia azo alaina avy amin'ny 4- santimetatra ka hatramin'ny diamondra 36-inch. Ny haben'ny fantsom-by dia misy manomboka amin'ny ¾- inch ka hatramin'ny diamondra 65-inch.
Misy ve ny fantsom-pandrefesana sy fantsom-pandrefesana HDPE kely amin'ny haben'ny fantsom-by ao anaty savaivony ary amin'ny haben'ny varahina varahina?
Eny, ny vokatra fantsom-pandrefesana kely HDPE dia misy amin'ny savaivony anatiny (SIDR) sy ny haben'ny fantsom-by amin'ny savaivony (CTS-SDR). Matetika, ny fantsona SIDR dia misy hatramin'ny ½-inch ka hatramin'ny 3-inch ny savaivony raha toa kosa ny vokatra haben'ny fantsom-by dia misy habe ¾-inch ka hatramin'ny 2-inch.
Aiza no ahitanao ny fampahalalana madiodio toy ny savaivony ivelany, ny hatevin'ny rindrina ary ny savaivony anatiny amin'ny habe samihafa amin'ny fantsona HDPE?
Raha ny mahazatra dia hita ao amin'ny literatiora navoakan'ny mpanamboatra fantsom-panafody HDPE sy amin'ny fenitra ASTM izy ireo. Izy ireo koa dia azo jerena ao amin'ny Fanazavana Fanampiny ho an'ny Toko faha-6 ao amin'ny boky torolàlana an'ny PPI an'ny Polyethylene Pipe, fanontana faha-2.
Inona no dikan'ilay fanafohezana HDPE?
HDPE dia midika hoe Polyethylene High Density.
Inona no fomba mety amin'ny fitiliana ny famoahana amin'ny fantsona HDPE?
Ny fantsona PE dia ekena fa manana ny rafitra fantsom-pitetezana ambany indrindra (azo tsapain-tanana amin'ny fampiasana azy amin'ny fizarana entona voajanahary) Amin'ny maha fantsom-pivoahana "aotra" dia tsy misy fampilazana voatondro momba ny famoahana ny famoahana. Ny detection leak dia sehatra mivoatra miaraka amin'ny fanatsarana teknolojia maro. Ny iray amin'ireo teknika mampanantena indrindra dia ny teknikan'ny feo, izay mihaino ny feo avoaka rehefa mandeha tsy tapaka ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny fanokafana tsy voalamina ao anaty fantsona. . + C220: L249